I-Little Haven Diani Beach Road, Cosy and Private - I-Airbnb
I-Little Haven Diani Beach Road, Cosy and Private
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguLittle Haven
ULittle Haven yi-Superhost
I-Little Haven yindlu ethe cwaka, etofotofo nelula kwigumbi lokulala elinye. Ifumaneka kwindawo yabucala ecaleni kweDiani Beach Road. Ulwandle lukumgama weemitha eziyi-200 kwaye luyafikeleleka ngeenyawo.
Ilula ngoxa iyigcina itofotofo kwaye isekhaya. Iindwendwe ziyakwazi ukuyibona yonke indlu nendawo
Ziikhilomitha eziyi-100 kuphela ukusuka kwiklabhu yegalufa ye-Leisure lodge,kufutshane neDiani Beach Hospital. Kukho iivenkile zokutyela zaseIndiya, zamaTaliyane nezaseTshayina ezikufutshane ibe kukho nevenkile enkulu esecaleni
kwayo Yikhilomitha eyi-1 kuphela ukusuka kwiziko lokuthenga laseDiani
Le ndlu ifenitshala ifriji, i-microwave, isixhobo sokutsha segesi, izinto zasekhitshini neWi-Fi yasimahla. Singabathandi bezilwanyana, sihlala nezinja zethu ezimbini ezithandekayo (iLabrador kunye nejakhethi russell) zinobuhlobo kakhulu kwaye ziyakuvuyela ukukwamkela.
Indawo yethu ngokuyintloko yindawo ethe cwaka, yabucala nekhuselekileyo.
Sikwindlela engaselunxwemeni lweDiani, iikhilomitha eziyi-150 ukusuka kwiklabhu yegalufu yaseLeisure. Ecaleni kweSupermarket kunye neDiani Beach Hospital kunye neekhilomitha eziyi-200 ukusuka elunxwemeni imizuzu eyi-3 xa uhamba ngeenyawo.
Kukho ivenkile yokutyela yaseIndiya neyaseTshayina. I-pizzeria yaseItaly ikude ngeemitha eziyi-200.
Indlu yekofu yaseJava ikumgama weemitha eziyi-500 ukusuka eCarrefour supermarket . Ibe yindawo yokutyela kaLeonardo, ivenkile yokutyela yaseItaly ekumgama oziikhilomitha eziyi-400.
Umbuki zindwendwe ngu- Little Haven
Open minded, easy going and fun
Siyazixabisa zonke izinto eziyimfihlo zeendwendwe zethu, kodwa ke, siyafumaneka nanini na emini nasebusuku.